Ifulethi le-Zen elisenhliziyweni Yenkinga aux Biches - I-Airbnb
Ifulethi le-Zen elisenhliziyweni Yenkinga aux Biches
Trou-aux-Biches, Pamplemousses District, i-Mauritius
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Billy
U-Billy uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
Ifulethi elisanda kulungiswa futhi elithokomele elibheke ukukhanya kwantambama okuhle lizokwenza uzizwe usekhaya ngaso leso sikhathi. Inamagumbi okulala angu-3 kanye ne-balcony. Kuyindawo yezulu ephelele enconyelwe labo abathokozela okwangempela nokuthula.
Itholakala enhliziyweni yedolobhana elihle laseTrou aux Biches. Itholakala kuphela imizuzu eyi-12 uhamba ngezinyawo ukuya ebhishi lomphakathi i-Trou aux Biches ngenkathi udlula esitolo esikhulu, i-minimart, amakhefi, isitolo sokudla kanye nezindawo zokudlela. Indawo ingasingatha abantu abangu-2 kuye kwabayisi-6.
Leli fulethi elingu-76 m2, esitezi sesibili sendawo yokuhlala yangasese linendawo yokupaka, isango likagesi kanye nokuphepha 24/7. Ikhishi livulekile endaweni ethokomele yokuhlala & yokudlela. Ihlanganisa isitofu segesi, ifriji, iketela likagesi, i-microwave futhi ihlome ngokuphelele. Usinki uyisitsha esiphindwe kabili futhi unamanzi ashisayo.
Igumbi lokugezela likhumbuza i-vibe ye-tropical. Ineshawa yemvula enamanzi ashisayo nazo zonke izinsiza ezidingekayo.
I-Trou aux Biches idolobhana labadobi elisogwini olusenyakatho-ntshonalanga yesiqhingi elinamabhishi amahle eduze. Indawo ethule enezinsiza ezahlukene; I-ATM, iposi, isuphamakethe, indawo yokubhaka, amathilomu, izindawo zokudlela kanye negalaji likaphethiloli.
Ngihlala ngitholakala kuselula yami.
Hlola ezinye izinketho ezise- Trou-aux-Biches namaphethelo